युद्धले भुलेको बाँकी युद्ध’ लड्ने साहसी कवि सुजन सेलिङ् | मझेरी डट कम
कवि तथा समालोचक सगुन सुसारा, इन्द्र मुकारुङ ‘दाबुङ’ प्रा. डा. नबोलकिशोर राईहरूको मार्ग आत्मसात गर्दै लिम्बुवान बस्तीमा बसेर राई बान्तावा भाषाको मातृभाषी साहित्यको सेवामा समर्पित छन् । यसले पनि प्रमाणित गर्छ कि पाँचथरे साहित्यको दम कति छ भनेर ? यी र यस्तै तरिकाले पाँचथरलाई आँखीझ्यालबाट चियाउने क्रममा हालसालै कवि राज माङलाक मार्फत अर्का सुन्दर कवि सुजन सेलिङको कविता संग्रह ‘युद्धले भुलेको बाँकी युद्ध’ हात परेको छ सोही कविता संग्रहभित्र प्रवेश गर्दैछु । मेरा मनमा लागेका कुराहरू राख्न ।
देशले भेडाबाख्रा पालेको छ
मुना नपलाउँदै खाँदैछन् देश,
४६ सालपछि लगातार’
(४९/तितो यथार्थ देशको)
मैले यो संग्रह पाउने वित्तिकै पहिलो नजर परेको कविता हो । यो कविताले मलाई यो देशको शासन सत्तातिर फर्केर सोच मग्न बनायो । आखिर जसरी भए पनि यो देशको ढुकुटी रित्ताउने त रै छन् । यो देशको सेवा सुविधा हामी सर्वसाधारणसम्म त नआइपुग्ने रैछ हाम्रो सेवा सुविधामा मोज गर्ने यो देशका नेतृत्व तह देखि बीचौलियासम्मको लाइन छ, हामी सर्वसाधारणले कसरी कहिले शान्तिको सास फेर्ने ? यो माथिको कवितांश बडो गम्भिर लाग्दो छ । यो संग्रह भित्रका मन परेको कविताहरू मध्येमा पर्छ यो कविता । यो कविता त सिङगो सर्व साधारण जनताको प्रतिनिधि आवाज सरह लागेको हो मलाई । पाँचथरे श्रष्टाहरू माथि टीका टिपपणी गर्ने मेरो खुबी छैन उनीहरूसँग भलाकुसारीसम्म गर्न सक्छु झनै वहाँहरूको विचार र प्रयोग सहितको कृतिमाथि लेख्न बोल्न के सकिन्थ्यो र ?
‘एकिकरणको भालाले रोपिएको छु,
एकात्मक सङगिनले घोचिएको छु,
भूमिसुधारको तरबारले काटिएको छु
केन्द्रिकृत गोलिले हानिएको छु
मलाई घाइते बनाइएको छ
म घाइते बाघ हुँ ।
कोशिस नगर्नु ।
म महान युद्धमा छु । ’
(९६/युद्धले भुलेको बाँकी युद्ध)
कविताको सामर्थ्य नाप्ने तराजु यो देशका कुन चाहिं समालोचकसँग होला ? अनि यो कवितालाई कुन छेउबाट नाप जाँच गर्ने ? उस्तै पूर्वाग्रही ढंगले यो कवितालाई समालोचना गर्ने समालोचकको त दिमागै रन्थनिन सक्छ । अहिलेको नयाँपनको लेखन आयाम कति समालोचकहरूलाई मनै परेको छैन, उनीहरू यथास्थितिलाई नै आत्मसात गरिरहेका छन् । सायद यसैको उदाहरण मान्नुपर्ला एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एकजना समालोचकले टिप्पणीकर्ताको भूमिका निभाउँदै यो किसिमका लेखन दश वर्षसम्म पढ्दिन भनेर खोकिहाले । यी समालोचकहरूले सुजन सेलिङका कविताहरूलाई त ओ हो यो त हाम्रो विरुद्धमा छ भन्दै हामी बहिस्कार गर्छौं भन्दै बाहिरिन के बेर ? यस्ता छन् यहाँका नाम चलेका समालोचक भनाउँदाहरूको अवस्था । धन्न चलेको छ नेपाली साहित्य ।
‘उ खरानी हुनु पूर्व
आफू आगो भएको पहिचान
फिलुङगो उडाएर उडाएर दिदैं हुन्छ खरानी । ’
(१२४/हेपिएको फिलुङगो )
यो अर्को गरिब निमुखाहरू अनि शोषित पीडित र यो देशका कयौं पिछडिएका र सीमान्तकृतहरूको प्रतिनिधि कविता हो यो । नेपालमा यतिसम्म बोल्न र लेख्न पाउने अधिकार सुजन सेलिङ जस्ता सचेत योद्धाहरूले गरेको कलमको युद्धकै कारणले पनि हो नत्र यी सीमान्तृतहरूको आवाज ती नै झुपडीहरूमा विलीन हुन पनि सक्थ्यो । मैले बुझेको जत्ति सुकैे ठुलो आन्दोलन वा क्रान्तिहरू भएपनि उनीहरूले छाडेको बाँकी युद्ध त कलमले त लड्दो रैछ । सुजन सेलिङका कविताहरू पनि यो बेला बाँकिरहेका युद्ध नै लड्दैछन् भन्ने भान भैरहेको छ मलाई । अनि उनको अर्को प्रशंसनीय पक्ष भनेको संस्कृति र संस्कारसँगै आफ्नो मिथकलाई उत्कर्षमा पुर्याउनु पनि हो । उनका इङ्वा, इक्सा र खाम्बोक, समाङ्खुको यादमा डुब्दा, बन्धकीमा बाँधिएको टारबारी, तिमीलाई मन नपर्ने कविता लगायतका कविताको मिथकीय चयनले कवितालाई चहकिलो बनाएको छ । यो बेला चरम उत्कर्षमा पुगेको पहिचान साहित्य लेखनलाई ठुलो टेवा पुगेको देखिन्छ ।
हाक्पारे र ख्याली सम्झन्छु म
‘साकेला र ल्योसार सम्झन्छु म
ककफेक्वा र सिसेक्वा सम्झन्छु
मैले सम्झने मात्र हो ।
हेर्न र खेल्न पाउँदिन म
म देश बाहिर छु । ’
(७५/म देश बाहिर छु । )
सेलिङ्को अर्को यो कविता मिथक र प्रवाशी विरहको बेजोड संयोजन सहितको कविता हो । उनका केही कवितामा चैं बिलकुलै प्रवाशको कष्ट र वेदना त्यहाँ रहनुको पीडा कलात्मक ढंगले उतारेका छन् । उनी स्वयम प्रवाशी जीवन भोगिरहेकाले पनि हुन सक्छ । यो शैदीको कविता आएको । र उनले त अरवी मलुकका शब्द चयन समेत गरेर आम पाठकहरूलाई नयाँ स्वाद पस्केका छन् । साँच्चै प्रवाशी हुनुको पीडा अनि प्रवाशिनुभन्दा अगाडिको नेपालीको जीवन भोगाई यथार्थ चित्रणले कविता छाड्नै मन लाग्दैन । बन्धकीमा बाँधिएको टारबारी कविता साँच्चै मन छुने किसिमको छ । त्यसो त मण्डेला खोजीदै, जय लिम्बुवान, लोकतन्त्र जस्ता कविताको स्वादले जो कोहीको जीव्रो रसिलो पार्छ । कतिपय कविताहरूले उनको लिम्बुवान क्षेत्रमा भएको अनि त्यहाँकै कुनै पर्वमा सेउलाले बारेको गोठहरूमा धान नाच र माङलाङ केलाङ नाचिरहेको झैं महसुस गराउँछ । यो उनको कवित्व हो अथवा कवि धर्मिता पनि हो ।
सेलिङको कवितामा कविताको अनुच्छेद सही बेलामा नभत्किनु अलिक असहज लाग्छ । कसैले मन परेको एउटा पंक्ति झिक्छुभन्दा कुन हो कुन भन्ने दोधार हुन सक्छ । पढ्न पनि यदाकदा असहज हुने खालको छ । अनि केही कविता चैं अति सामान्य लाग्ने पनि छन् । यसले पनि पाठकलाई अलिक खल्ल्लोपना महसुस हुन सक्छ । यो संग्रहको सम्बन्धमा यहाँभन्दा उता मैले बोल्ने हिम्मत गरिन । यो त मेरो मनको रहर मात्रै हो बोल्ने र लेख्ने कुराहरू यो देशका प्रा. डा. तथा समालोचकहरूले बोलिसकेका छन् । बस् अन्त्यमा यति भन्छु सुजन सेलिङ जि, यहाँको कलमले अरुले बेवास्ता गरेका यी यस्तै युद्ध लडिरहोस् जुन युद्ध हाम्रो साझा मुद्दाको निम्ति होस् ।
साभार:- Nayaonline patrikaa